Waa maxay duufaannada, noocyada iyo astaamaha duufaannada iyo duufaantu | Saadaasha Shabakadda
Dhammaan ifafaalooyinka saadaasha hawada ee ka dhaca meeraheenna, waxaa jira qaar soo jiita fiiro gaar ah: duufaanno. Waxaa jira dhowr nooc, mid walbana leh astaamo u gaar ah oo ka dhigaya ifafaale in la jeclaado.
Laakiin sidee loo sameeyay? Haddii aad rabto inaad wax walba ka ogaato, ha moogaan tan gaarka ah.
1 Waa maxay duufaan?
2 Duufaan kuleyl leh
2.1 Faa'iidooyinka duufaanada kuleylaha
3 Duufaanta dabiiciga ah
4 Duufaan kuleylka ah
5 Duufaantii Polar
Saadaasha hawada, duufaanta micnaheedu waxay noqon kartaa laba shay:
Dabaylo aad u xoog badan oo ka dhaca meelaha cadaadiska jawigu ku yar yahay. Waxay ku hormareen wareegyo waawayn oo naftooda ku meeraysanaya, asal ahaana ka soo jeeda xeebaha, badanaa kuleylka.
Cadaadiska hoose ee jawiga hawada halkaasoo roobab badan iyo dabaylo xoogani ka dhacaan. Waxaa sidoo kale loo yaqaanaa 'squall', khariidadaha hawadana waxaad ku arki doontaa iyada oo loo taagan "B".
Dawada lidka ku ah lidka-lidka waa cakis, taasi waa, gobol cadaadis badan oo keena cimilo wanaagsan.
Waxaa jira shan nooc oo duufaanno ah, kuwaas oo kala ah:
Duufaan kuleyl leh
Waa a xawaare wareegaya oo leh xarun cadaadis hoose (ama isha). Waxay soo saartaa dabaylo xoog leh iyo roob tiro badan, iyada oo tamarteeda ka soo saarta uumiga hawada qoyan.
Waxay ku dhacdaa, inta badan, gobollada ku-meel-gaadhka ah ee meeraha, biyaha diiran ee diiwaan geliya heerkul qiyaastii ah 22ºC, iyo marka jawigu yara yara deggan yahay, taasoo dhalisa nidaam cadaadis hooseeya.
Qaybta woqooyi ee waqooyiga waxay u rogmataa saacad-diimeed; Dhinaca kale, dhanka koonfureed ee dhanka koonfureed gadaal ayey ugu rogtaa. Si kastaba xaalku ha ahaadee, way soo saartaa burbur ballaaran oo soo gaaray dhulka xeebta roobab mahiigaan ah awgeed taas oo iyaduna keenta duufaanno iyo dhul-gariir.
Waxay kuxirantahay xooggeeda, waxaa loogu yeeraa diiqad kulaylaha ah, duufaanada kulaylaha, ama duufaan (ama duufaanno Aasiya) Aan aragno astaamaha ugu muhiimsan:
Niyad jabka kuleylka: xawaaraha dabayshu waa ugu badnaan 62km / saacaddii, wuxuuna sababi karaa dhaawac culus iyo daadad.
Duufaanta kulaylaha: xawaaraha dabaysha ee u dhexeysa 63 iyo 117km / saacaddii, iyo roobabkeeda culus ayaa sababi kara daadad waaweyn. Dabaylo xoog badan ayaa soo saari kara duufaanno.
duufaan: Waxaa loogu magac daray Duufaan markii xoogeedu ka bato kala soocida duufaanka kuleylaha. Xawaaraha dabayshu waa ugu yaraan 119km / saacaddii, wuxuuna waxyeello daran u geysan karaa xeebaha.
Duufaannadu waa duufaanno waxyeello weyn geysan kara, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la ogaado si loo qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah oo sidaas looga fogaado luminta nolosha aadanaha.
Qiyaasta Duufaanta Saffir-Simpson waxay kala saartaa shan qaybood oo ah duufaanno:
Qeybta 1: xawaaraha dabayshu wuxuu u dhexeeyaa 119 ilaa 153km / saacaddii. Waxay sababtaa daadad ka dhaca xeebta, iyo xoogaa waxyeelo ku gaadho dekedaha.
Qeybta 2: xawaaraha dabayshu wuxuu u dhexeeyaa 154 iyo 177km / saacaddii. Waxay waxyeello u geysataa saqafyada, albaabbada iyo daaqadaha, iyo sidoo kale meelaha xeebta ku yaal.
Qeybta 3: xawaaraha dabayshu wuxuu u dhexeeyaa 178 iyo 209km / saacaddii. Waxay ku keentaa burburka dhismaha dhismayaasha yaryar, gaar ahaan meelaha ku teedsan xeebta, waxayna dumisaa guryaha guurguura.
Qeybta 4: xawaaraha dabayshu waa inta u dhexeysa 210 iyo 249km / saacaddii. Waxay u geysataa dhaawac baahsan dhismooyinka difaaca, saqafyada dhismayaasha yar-yar ayaa dumma, iyo xeebo iyo dhul-beereedyo ayaa qarqara.
Qeybta 5: xawaaraha dabayshu waa in ka badan 250km / saacaddii. Waxay burburisaa saqafka sare ee dhismayaasha, roobabka culus waxay sababaan daadad gaari kara dabaqyada hoose ee dhismayaasha ku yaal aagagga xeebta, daad gureynta aagagga la degan yahayna waxay noqon kartaa lagama maarmaan.
Faa'iidooyinka duufaanada kuleylaha
In kasta oo ay waxyeelo daran geysan karaan, runtu waxay tahay inay iyaguna yihiin aad u wanaagsan nidaamka deegaanka, sida kuwan soo socda:
Waxay joojin karaan xilliyada abaarta.
Dabaylaha ay soo saarto duufaanku waxay dib u soo noolayn karaan doogga, iyagoo ka saari kara geedo duugoobay, xanuunsan ama tabar yar.
Waxay biyo macaan u keeni kartaa estuaries.
Duufaanta dabiiciga ah
Duufaannada Stratropical, oo sidoo kale loo yaqaanno duufaannada bartamaha-latitude, waxay ku yaalliin latitudes-ka dhexe ee dhulka, inta udhaxeysa 30º iyo 60º laga bilaabo dhulbaraha. Waa astaamo aad u caan ah, oo ay weheliyaan anticyclones waqti ku wareegaan meeraha, iyagoo soo saaraya ugu yaraan daruuro yar.
Waxay la xiriiraan a nidaamka cadaadiska hooseeya ee ka dhex dhaca kuleylaha iyo ulaha, oo waxay kuxirantahay kala duwanaanta heerkulka ee u dhexeeya hawo diirran iyo qabow. Waa in la ogaadaa in haddii uu jiro hoos udhac la dareemi karo oo deg deg ah cadaadiska Hawada, loo yaqaan walxaha qarxa ee cyclogenesis.
Waxay sameysmi karaan marka duufaanta kuleylaha ah ay gasho biyaha qabow, taasoo sababi karta dhaawac culus, sida daadadka o dhul go '.
Duufaan kuleylka ah
Waa duufaan taas wuxuu leeyahay astaamo kuleylaha iyo siyaado ah. Tusaale ahaan, duufaantii duufaanka ahayd ee Arani, oo la sameeyay bishii Maarso 14, 2011 meel u dhow Brazil oo qaadatay afar maalmood, waxay lahayd duufaanno 110km / saacaddii ah, waana sababta loogu tiriyey inay tahay duufaan kulayle ah, laakiin oo lagu sameeyay qayb ka mid ah Badweynta Atlantik halkaas oo duufaannada kulaylaha badanaa aan samaysmin.
Sidoo kale loo yaqaan 'arctic cyclone', waa nidaam cadaadis hooseeya oo dhexroor u dhexeeya 1000 iyo 2000 km. Waxay leedahay nolol ka gaaban tan duufaannada kulaylaha, maxaa yeelay waxay qaadataa oo keliya 24 saacadood si ay u gaarto ugu sarreysa.
Genera dabaylo xoog leh, laakiin inta badan waxyeello uma geysato maaddaama ay ku samaysmayaan goobo kooban.
Waa a wareegga hawada, inta udhaxeysa 2 iyo 10 km dhexroor ah, oo ka sameysanta duufaan wax soosaara, taas oo ah, hawadu wey kacdaa oo wey ku wareegtaa. Badanaa waxay la xiriirtaa gobol maxalli ah oo cadaadis hooseeya ku jira duufaanka, kaas oo abuuri kara dabeylo dusha sare leh iyo roob dhagaxyaale.
Haddii xaaladaha saxda ahi jiraan dhacdaa oo ay weheliso dallacsiinta gudaha isboorti, kuwaas oo aan ka badneyn duufaanno waaweyn oo wareegaya, oo duufaan ka imaan karto. Dhacdadan cajiibka ah waxaa lagu sameeyaa xaaladaha deganaansho la’aanta sare, iyo marka ay dabeylo xoog leh ka dhacaan meelaha sare. Si aad u aragto, waxaa lagugula talinayaa inaad tagto Bannaanka Weyn ee Mareykanka iyo Bannaannada Pampean ee Argentina.
Kuwaasna waxaan ku dhamaynaynaa. Maxaad u maleysay tan gaarka ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Waa maxay duufaannadu